काठमा’डौंका यी २८ वर्षीय युवाले पत्ता लगाए विश्वले पत्ता नलगा’एको कुरा, दुनिया चकि’त ! – SUDUR MEDIA
March 18, 2021 AdminLeaveaComment on काठमा’डौंका यी २८ वर्षीय युवाले पत्ता लगाए विश्वले पत्ता नलगा’एको कुरा, दुनिया चकि’त !
खगोल’शास्त्री एक नेपाली अनुसन्धा’नकर्ता सम्मिलित समूहले पुथ्वि जस्तै अर्को ग्रह पत्ता लगाएका छन् । काठमाडौंका २८ वर्षीय युवा प्रज्वल निरौला सम्मिलित समूहले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका हो । अमेरिका’को मासाच्यु’सेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलो’जीमा प्लानेटरी साइन्समा पीएचडी गर्दै गरेका काठमाडौं मैतीदेवीका निरौलाको समूहमा मुख्य भूमिका छ ।
सौर्यमण्डल बाहिरको ग्रहको अध्ययन गर्न निरौ’लासहित अमेरिका, बेल्जिय, बेलायत, स्विजरल्या’ण्डलगायत मुलुकका २८ जना अनुसन्धानकर्ताको टोली खटिएको थियो । उक्त ग्रहसम्बन्धी अनुसन्धा’नात्मक आलेख एस्ट्रोनोमिकल जर्नलमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यो ग्रहलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष श्रेत्र नासाले समेत मान्यता दिएको छ ।
निरौलाले नयाँ ग्रहको खोज र विशेष’ताहरुको अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ । खगोल’शास्त्री एक नेपाली अनुसन्धा’नकर्ता सम्मिलित समूहले पुथ्वि जस्तै अर्को ग्रह पत्ता लगाएका छन् ।काठमाडौंका २८ वर्षीय युवा प्रज्वल निरौला सम्मिलित समूहले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका हो । अमेरिका’को मासाच्यु’सेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलो’जीमा प्लानेटरी साइन्समा पीएचडी गर्दै गरेका काठमाडौं मैतीदेवीका निरौलाको समूहमा मुख्य भूमिका छ ।
सौर्यमण्डल बाहिरको ग्रहको अध्ययन गर्न निरौ’लासहित अमेरिका, बेल्जिय, बेलायत, स्विजरल्या’ण्डलगायत मुलुकका २८ जना अनुसन्धानकर्ताको टोली खटिएको थियो । उक्त ग्रहसम्बन्धी अनुसन्धा’नात्मक आलेख एस्ट्रोनोमिकल जर्नलमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यो ग्रहलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष श्रेत्र नासाले समेत मान्यता दिएको छ । निरौलाले नयाँ ग्रहको खोज र विशेष’ताहरुको अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ ।